I-Semalt ichaza indlela yokujongana nabaFebhisi be-Spam
Ukufumana ngokwaneleyo i-traffic kungaba yinto ephuphayo kuyo yonke i-marketer. Nje ngeziphumo,Abantu basebenzisa iindlela ezahlukeneyo zokufumana i-traffic online. I-Intanethi ngumthombo omkhulu ongenza i-website ifumane iindwendwe ezininziukusuka kwiinkalo ezahlukeneyo zehlabathi - dualo. Iiwebhusayithi ezininzi eziyimpumelelo ziyazi amandla okuthengiswa kwe-intanethi. Baqesha ii-agencies ze-SEO ukwenza ezinyeiindlela zokuthengisa zedijithali ezifana nokuthengiswa komxholo. Abanye baphumelele kakhulu ekufumaneni i-backlinks ngokusebenzisa i-Social Media Marketing(SMM). Ngenxa yoko, kubalulekile ukusebenzisa iindlela ezifanelekileyo zokuthengisa idijithali kule mihla kunye nokufezekisa okulungileyo. UseshoInjini yokuSebenza (SEO) idibanisa iindlela ezahlukeneyo zokuza necebo elifanelekileyo lokuthengisa intanethi. Iyakwazi ukuphucula konkeezinye iindlela ezifana ne-backlinking kunye nokufunyanwa.
Nangona kunjalo, uMichael Brown, Semalt Umphathi Wempumelelo yoMthengi, angathanda ukukukhumbuza ukuba ezinye i-spammers zininzi iindlela zokufumana phakathi komsebenzi we-digitalumthengisi kunye neenjongo zabo. Abaninzi abafakekisi be-spam basebenzise iindlela ezifana nokutyelela iphepha lokutyelela ukunyanzela uluntu ngokuchofoza iikhonkco ukuba zibe khonaiiwebhusayithi eziyingozi. Kwamanye amaxesha, ugaxekile uqulethe iTrojans kunye ne-malware ekhoyo kwintsholongwane okanye ikhowudi ngaphakathi kwezenzo zabo zokubethelwa kwee-call-to-action okanyeezinye izinamathiselo ezikhuthaza ukuba ixhoba licofe. Kwiimeko ezininzi, unokufumana uninzi lwezithuthi kwi-Google Analytics yakho.Nangona kunjalo, lo shishino alunakubonakalisa kwideshibhodi okanye ezinye izixhobo, ezihlalutya ukusebenza kwamaphepha akho ewebhu. Omhle umzekeloezo zihanjiswa, ezivela kwiDarodar.Com. Unokuphelisa ulaka lwezo zihlaselo kunye nokusetyenziswa kwamanye amacandelo kule nqaku..
njani ukuvimbela abaxhasi be-spam?
Kukho imfuneko enkulu yokuthintela ezinye ze-spam zokuhanjiswa zizama ukudibanisayakho iblogi. Lo mqathango unokukhusela ukhuseleko lwewebhusayithi yakho kunye nokugcina abahlaseli kude nabaphulaphuli bakho. Ininzi yewebhusayithi ifomisenzo kwipaneli yomphathi. Ngokomzekelo, ungasebenzisa ukubhalwa kwenkcazo kwipaneli yakho yolawulo kunye ne-Google Analytics. Kukho kwakhonaezininzi izihlunu zogaxekile ezikhoyo kubasebenzisi be-intanethi nabanye abantu abanomdla ekwenzeni i-intanethi ngokukhuselekileyo. Kulezi zihlungi,Kubalulekile ukushiya icebo apho ungabuka khona imilayezo ebalulekileyo. Iifayile ziyakwazi ukubona ii-imeyile ezithembekileyo njengogaxekile. Ekugqibeleni,ukudala uluntu kuluntu lunokuba ngumlinganiselo omhle. Le nkohliso inokunciphisa ukuhlaselwa kwe-spam yokugqibela. Ezi ziquka ezoAbahlaseli bajolise kwidilesi ye-imeyile yeakhasimende ukuba bathathe amaphasiwedi.
Zonke iiblogi ze-intanethi okanye i-intanethi ye-intanethi idinga i-traffic. Ngenxa yoko, kukhoezininzi iindlela zokuthengisa nge-intanethi, ezinokuzisa i-traffic kwindawo yakho. Ezinye zeendlela zisebenzisa amaqhinga amhlophe emhlophe xa abanye basebenzisaamaqhinga amnyama. Kwiimeko ezininzi, iinkampani zisebenzisa iindlela zokumhlophe ezimhlophe ezifana nokuthengiswa komxholo, i-SEO kunye nokuthengiswa kweeNkonzo zoLuntu. UkudluliselwaI-traffic ithatha inxalenye ebalulekileyo yokuguqula abathengi. Nangona kunjalo, xa kuvela kwi-spam referrers, kunokuhlawula iinjongo ze-SEOkunye nemibandela enjenge-cyber threats. Unokuphepha abafaki bogaxekile njengamaqonga e-darodar.com kunye nokusetyenziswa okungaphezulu kwesi sikhokelo. Ngaphezu koko,esi sikhokelo sinokukunceda ukhusele ukhuseleko lwezithuthi kunye nabathengisi bekhompyutha.